Ahoana ny fampisehoana ireo rakitra Powerpoint anao? - Easy Multi Display
Noforonina On Aprily 11, 2021
Ahoana ny fampisehoana ireo rakitra PowerPoint amin'ny Easy Multi Display?
Te hahafantatra ny fomba fampisehoana ny fisie PowerPoint amin'ny Easy Multi Display ianao? Ka eo amin'ny toerana mety ianao!
Azonao atao ny mampiasa ny maody Rindrambaiko ho an'ny Powerpoint fa amin'ny ankapobeny dia manoro hevitra ny mpanjifanay izahay mba aleonay manao fanondranana horonan-tsary ny sary mihetsika Powerpoint azy ireo raha mety.
-Ny mpilalao powerpoint dia tompony ary tsy dia mifanerasera firy, ohatra, tsy afaka manokatra powerpoint 2 ianao amin'ny fotoana mitovy na tsy azo atao ny manome azy masontsivana toy ny haben'ny haavon'ny xy amin'ny sidina dia efijery feno na efijery feno ...
-Mila fahazoan-dàlana amin'ny birao amin'ny mpilalao pc koa ianao ...
Miaraka amin'ny famelabelaran-kevitrao navadika ho horonan-tsary dia azonao atao ny mampiseho ny fampisehoana 1 ka hatramin'ny 24 eo amin'ny efijeryo amin'ny EMD, raha misy faritra ny horonan-tsarinao dia azonao atao ny manindry azy ary haseho amin'ny efijery feno izy, tsindrio indray ary hafindra ao aminy io. faritra ary azonao atao ihany koa ny miato ny famelabelaranao.
Maninona no ovay amin'ny horonan-tsary ny famelabelaranao?
Raha te hanolotra kinova fitokisana avo lenta amin'ny fampisehoana ataonao amin'ireo mpiara-miasa aminao na mpanjifanao ianao (toy ny firaketana amin'ny mailaka, amin'ny alàlan'ny famoahana Internet na amin'ny CD na DVD), dia azonao atao ny manoratra sy milalao azy io ho toy ny horonan-tsary.
Azonao atao ny mitahiry ny famelabelaranao amin'ny maha rakitra an-tsary MPEG-4 (.MP4) na .wmv. Ireo endrika roa ireo dia tohanana betsaka ary azo ampiasaina amin'ny webcasting.
Ireto misy torohevitra tokony hotadidinao rehefa manoratra ny fampisehoana nataonao ho toy ny horonan-tsary
Azonao atao ny mandray an-tsoratra sy ny fotoana fanazarana feo sy ny fihetsik'ireo mpanondro tamin'ny laser amin'ny horonan-tsarinao, azonao atao ihany koa ny mifehy ny haben'ny rakitra haino aman-jery sy ny kalitaon'ny horonantsarinao ary afaka mampiditra sary mihetsika sy tetezamita amin'ny sarimihetsikao.
Ny mpihaino anao dia afaka mijery ilay fampisehoana nefa tsy mila mametraka PowerPoint amin'ny solosain'izy ireo.
Raha misy horonan-tsary mirakitra fampisehoana nataonao, dia hilalao tsara ilay horonan-tsary nefa tsy mila manamarina azy ianao.
Miankina amin'ny atin'ny fampisehoana nataonao, mety maharitra fotoana fohy ny famoronana horonan-tsary. Ny famelabelarana sy fampisehoana lava kokoa miaraka amin'ny sarimiaina, tetezamita ary atiny multimedia dia haharitra kokoa vao hamorona. Soa ihany fa afaka manohy mampiasa PowerPoint ianao mandritra ny famoronana ilay horonan-tsary.
Ahoana ny fomba hanovana ny rakitra PowerPoint ho horonan-tsary
Amin'ity fehintsoratra ity dia hanazava aminao izahay ny fomba hanovana ny rakitra PowerPoint ho horonan-tsary.
Avy amin'ny menio File, safidio ny Save raha azo antoka fa voatahiry ao anaty endrika fampisehoana PowerPoint (.pptx) ny asanao vao haingana.
Kitiho ny rakitra> Export> Mamorona horonantsary. Na, eo amin'ny takelaka Record of the Ribbon, kitiho ny Export to Video).
Ao amin'ny boaty latsaka voalohany eo ambanin'ny lohateny Create Video, safidio ny kalitaon'ny horonan-tsary tadiavina, izay ny famahana ny horonantsary vita. (Azonao atao ny manandrana ireo safidy samihafa misy hamaritana hoe iza no mety amin'ny filanao).
Ny safidy samihafa
3840 x 2160, haben'ny rakitra avo indrindra
1920 x 1080, haben'ny rakitra lehibe indrindra
Fampisehoana solosaina sy HD
1 280 x 720, haben'ny rakitra antonony
Internet sy DVD
852 x 480, haben'ny rakitra ambany indrindra
* Ny safidy Ultra HD (4k) dia tsy misy raha tsy mampiasa Windows 10 ianao.
Ny boaty midina faharoa eo ambanin'ny lohateny Create Video dia manondro raha toa ka misy fitantara sy famantaranandro ny fampisehoanao. (Azonao atao ny mampandeha / manafoana ity toe-javatra ity raha tianao).
Raha mbola tsy nanoratra fitantarana ara-potoana ianao, ny default dia Aza mampiasa fotoana na fitantarana voarakitra.
Raha atao default dia 5 segondra ny fotoana lany amin'ny slide tsirairay. Azonao atao ny manova an'io fotoana io amin'ny segondra handany isaky ny faritra mikorisa. Eo ankavanan'ny boaty, kitiho ny zana-tsipìka ambony hampitomboana ny fotoana na ny zana-tsipika ambany hampihena ny fotoana.
Raha nanoratra fitantarana ara-potoana ianao, ny sanda default dia ny fampiasana fotoana sy fitantarana voarakitra.
Tsindrio Mamorona Video
Ao amin'ny boaty Anaran-drakitra, mampidira anarana rakitra ho an'ilay horonantsary, zahao ny fampirimana tianao hitahiry ilay rakitra, ary kitiho ny Save.
Ao amin'ny boaty Type, safidio horonan-tsary MPEG-4 na Horonan-tsary Windows Media.
Azonao atao ny manaraka ny fivoaran'ny famoronana horonan-tsary ao amin'ny tsipika fizarana eo ambanin'ny efijery misy anao. Ny fizotry ny famoronana horonan-tsary dia mety maharitra adiny maromaro miankina amin'ny halavan'ny horonantsary sy ny fahasarotan'ny fampisehoana.
Vita ny fandaminana!
Soso-kevitra: Raha misy horonan-tsary lava dia azonao atao ny mametraka azy io mba hamboarina ny ampitso. Amin'ity fomba ity dia ho vonona amin'ny maraina izy.
Raha te hilalao ilay horonantsary izay vao noforoninao dia mankanesa any amin'ny toerana fampirimana voatondro ary kitiho indroa ny rakitra.
Mbola manana fanontanianao ve ianao?
Ny signage nomerika dia manampy amin'ny famoahana vaksinin'ny NYC COVID-19
Fomba marani-tsaina 5 hanatsarana ny varotrao sy ny fifandraisanao amin'ny Signage Digital
Maninona ny signage niomerika no nivadika tamin'ny faniriana ho amin'ny tsy maintsy ho an'ny indostrian'ny QSR
Easy logo Multi Display